Obianọ Ekwe Nkwa Inwògharị Ngala Mmiri Steeti Anambra
Ọchịchị steeti Anambra ekwupụtala ezi njikere ya ma kwe nkwa ịbàgide n'amụma itute na inwògharị ngalaba mmiri steeti ahụ, dịka ọ bụ ihe dị oke mkpa.
Aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ mere ka a mara nke a oge ọ gara ileta ka ọrụ si aga n'ebe dị iche iche e ji ọrụ ngo mmiri n'aka n'okpuru ọchịchị Awka Sawụtụ, nke gụnyere ndị dị na Nibo na Amawbịa. N'ịkwado ya bụ ọrụ ngo, gọvanọ Obianọ mekwara ka a mara ọchịchị steeti ahụ amapụtala ọtụtụ ego nye ngalaba ahụ iji hụ na e tutere ya n'ụra.
O kwuru na ọrụ ngo mmiri nke dị n'Amawbịa bụ ọchịchị Maazị Peter Obi malitere ya ma a gbahapụrụ ya kemgbe ahọ 2013, ma sịkwa na obodo asaa ga-erite urù na ya ma ọ bụrụ na a rụchaa ya. Ka o leruchara anya n'ebe ahụ, gọvanọ Obianọ gosipụtara afọ ojuju ya banyere otu ọrụ si aga n'ike n'ike ma kwuo na mgbe adịghị anya na obodo asaa ahụ ga-amàlite inwe mmiri gbaanyụụ.
Otu ọ dị ugbu a, e tutela ma mee ka igwe na-afụlite mmiri elu n'ebe ndị ahụ malitekwa ịrụ ọrụ ugbu a, ebe gọvanọ kwekwara nkwa na a ga-etutesikwa ọrụ ngo mmiri ndị ọzọ dịbụ na steeti ahụ ka ha malitekwa ịrụ ọrụ n'uju.
N'okwu nke ya, kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka mmiri na ịkwalite mmiri ọñụñụ na steeti ahụ, bụ maazị Obi Nwankwọ kwuru na ọ bụ elerughị anya mere na mmiri ndị ahụ anaghị agbabụ agba, ma sị na ọchịchị Obianọ ga-edozigharịsị ha niile ugbu a, ma were ha hafèé n'aka kọmitii nke ndị obodo ahụ ga-eji aka ha họpụta, maka ileru ha anya nke ọma.
O kwukwara na ọ bụrụ na e dozigharịachaa ọdụ mmiri niile ahụ, na a ga na-agbanye ndị mmadụ mmiri n'efu, ebe ndị ji ụgbọala ere mmiri bụ ndị a ga na-eresi mmiri eresi, iji wee nweta ego a ga-eji na-eleru mmiri ndị ahụ anya.